RASMI: Kooxda Manchester City oo xaqiijisay bixitaanka Kabtankeeda Vincent Kompany – Gool FM
RASMI: Kooxda Manchester City oo xaqiijisay bixitaanka Kabtankeeda Vincent Kompany
(Manchester) 19 Maajo 2019. Manchester City ayaa xaqiijisay in kabtankeeda haatan ee Vincent Kompany uu kooxda ka tagi doono xagaagan kaddib 11-sanadood oo uu ku sugnaa.
33-sano jirkaan ayaa kooxda Sky Blue ku soo biiray xagaagii 2008, waxaana uu Man City u saftay in ka badan 300 oo kulan.
Kompany ayaa xalay kooxdiisa Man City kula guuleystay tartanka FA Cup-ka, markaasoo ay City 6-0 kaga adkaatay Watford, isla markaana dhammaystirtay inay wada qaaday saddexda koob ee Maxaliga ah ee laga dhigo dalka Ingiriiska.
Difaacan dhexe ayaa waxa uu Mark Hughes kala soo saxiixday kooxda reer Jarmal ee Hamburg, maalmo yar ka hor markii Sheikh Mansour uu la wareegay kooxda Man City.
Vincent Kompany ayaa ciyaaray kulankiisii ugu dambeeyey ee kooxda Manchester City final-kii FA Cup-ka oo ay xalay guusha ka gaareen Watford.
Waxa uu Kompany ka mid noqday xiddigaha furaha u ah kooxda, waxaana uu Manchester City ka tagayaa isagoo kula guuleystay afar Premier League, labo FA Cup, afar League Cup iyo labo Community Shield.
“Difaacan waxa uu ka tagayaa kooxda 11 sanadood kaddib markii uu kula guuleystay afar Premier League, labo FA Cup, afar League Cup iyo labo Community Shield” ayuu u dhignaa qoraal ay Man City ku soo daabacday Website-keeda rasmiga ah.
Wadar ahaan Vincent Kompany ayaa u ciyaaray kooxda Manchester City 360 kulan, waxaana uu u dhaliyey 20 gool.
Waxyaabihii laga diiwaan geliyey kulankii xalay ay kooxda Manchester City ku hanatay tartanka FA Cup-ka
Xilliga ay Real Madrid ku dhawaaqi doonto Heshiisyada Eden Hazard iyo Luka Jović oo la sii shaaciyay